Mey 21, 2018 Admin
Filipina SEC kaomisera mangataka crypto mpandray anjara’ Fanamarihana Mahakasika ity fitsipika
Ny Filipina 'tsena regulator, ny Fiarovana sy ny Exchange Commission, mitady ny fahan'ny ny crypto sy ny blockchain “mpandray anjara” mba hanampy eo amin'ny fandrafetana ny governemanta sampan-draharaha misahana fitsipika mety ho ny toerana.
SEC Kaomisera Ephyro Luis Amatong niteny nandritra ny fivoriana ny Filipina Fikambanan'ny Digital Varotra sy ny Indostria décentralisées, ka nanao hoe::
"Ny governemanta te ho tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny famoronana fitsipika momba ny cryptocurrency. Te-hanao ny mpandray anjara rehetra amin'ny alalan'ny fangatahana ho an'ny hevitra. Tsy te handrara na inona na inona satria tsy mahatakatra zavatra. Izany no mahatonga ny fanamarihana sy ny fiaraha-miasa no zava-dehibe mba hahafahantsika tonga amin'ny iray mety fitsipika momba ny varotra cryptocurrency. "
Colorado ny mpanao politika tsy ho ela afaka hanaiky crypto fandraisana anjara
Ny fanjakan'i Colorado ela dia afaka mamela ny komity ara-politika mba handray anjara biriky amin'ny cryptocurrency.
Ny Biraon'ny ny Colorado Sekreteram-panjakana namoaka vaovao volavolan miasa ao aminy “Fitsipika momba ny Fitantanam-bola sy politika Fanentanana” izay indrindra ahitana vaovao momba cryptocurrency fizarana fanomezana.
Ny tari-dalana nanolo-kevitra milaza:
“Ny komity dia mety handray anjara amin'ny cryptocurrency, niakatra ho any amin'ny fetra azo ekena ho vola na fanomezana vola madinika. Ny vola ny fanomezana dia ny lanjan 'ny cryptocurrency amin'ny fotoana ny fanomezana. Dia tsy maintsy manao tatitra ny komity misy harena na very araka ny fanomezana fidiram-bola hafa na ny rosia.”
Rosia & Iran cryptocurrencies manaiky fa azo ampiasaina mba tsy SWIFT ary koa ny sazy
Irans lohan'ny raharaha ara-toekarena, Mohammad Reza Purebrakhim, Nilaza nomerika mampiasa vola toy ny midika hoe ho afa-mandositra avy amin'ny fitarihan'ny dolara ho toy ny “mahabe fanantenana tari-dalana.”
Izany no noresahina nandritra ny fivoriana ny lohan'ilay Federasiona Rosiana tamin'ny Filan-kevitry ny Komity politika ara-toekarena Dmitry Mezentsev izay samy Rosia sy Iran nilaza crypto toy ny maha-fanoloana ny SWIFT interbank rafitra fandoavam-bola, fampiasana izay mety hampihena na koa sazy vola napetraka ao amin'ny firenena, manao Rosia amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Iran tamin'ny soa ireo amin'ny fampiasana crypto.
CoinGate ny hanomboka Bitcoin Lightning Network fandoavam-bola fanodinana
Fandoavam-bola processeur service CoinGate dia nanomboka naka fanahy Tselatra Network.
Ny orinasa dia manantena ho tonga ny fandoavam-bola voalohany processeur nanaiky fandoavam-bola amin'ny velona Boky fepetra.
Mey 28, 2018 amin'ny 1:46 PM
Mey 28, 2018 amin'ny 7:55 PM
Jona 21, 2018 amin'ny 8:41 PM